QABSOON OROMOO “MAARSHII” GEEDDARUU QABAA ! | QEERROO
Posted on January 2, 2018 by Qeerroo
Nuuti ammallee Humnaa fi Qabeenyaa , akkasumas, dandeetti qabnuu qindeeffannee hin kaanee. humni sochoosaa fi tarkaanfileen fudhatamaa jiran, ofii keenyaa miinee isa kaan akka hin dallansiifnee ofirratti murteessaati. Miidhaa fi dhira nurratti raawwatamuun rifannus, inni kaan akka hin rifanneef ilaallachaa tarkaanfachaa jirra. Sochii keenya kana qofaatu , Mootii addunyaa dubbachiisuu eegalee jira. Kanarra tarkaanfii tokko MAARSHII geeddarraan, Seenaa xuraa’aa Gaanfa Afriikaa jijjiiruuf yaboo isaa fudhanna. Yeroo kanatti rakkoo baroota dheeraa keessa dabarre odeessaa goomachuu osoo hin taanee, Wareegama kafalaa jirrutti firii godhachuuf gama hundaan, Obsaa fi Murannoon keessa ba’uu qabnaa. Wareegamni amma baasaa jirru, dhaloota wareegamuu obbolaa isaa tarkaanfatee wareegama biraa baasuun barbaachisaa ta’uutti amanun waan ta’eef , hamilee isaanii eeguuf dirqamaan waan goonfannee jabaannee tikifachuu qabnaa. Sodaan NAMICHA AMEERIKAA HERMAAN KOYIIN mudachuu fi dhiisuun wayyaanee harka jira. Nuuti badii geesisuuf ykn Biyya seerri keessa hin jirre uumuuf deemaa hin jirru. Seera kan qajeelachuu isa seera irraa jal’atee seeratti deebisuu qofaan taati . kanaaf wayyaaneetu sodaa namichaa gama lamaanuu dhogomsaa hubadhaa. Nuuti ka seera dabsee karaa irraa kaasuuf deemna. Kan seera dabsee karaa irraa ka’uu didee jennaan , dirqamaan karaa irraa kaasuun murteedhaa. Kun biyya seera dhabdee nama taasisa taanaan boolla haa seentuu. Seerrii ka cabee gaafa seera abbaa biyyaa cabsanii waan ta’eef.
3.FINFINNEE KEESSATTI MAARSHII GEEDDARUU :
3.MOOTUMMAA KUFFISUUF QABXII INNI GUDDAAN MAALII ?